Zivame kangakanani ukuvumela inzala yakho oyithandayo ukuba ubukele iTV? Ngaba wayesazi ukuba abantwana abachitha ixesha elide bebukele umabonwakude banomdla wokunyanyisa, isifo sikashukela, kunye nokusebenza kwesikolo kukuthanda okungcono. Yiyo esiza kuthetha ngayo kwinqaku elithi "I-TV ithintela njani abantwana? "U
Ukubukela ithelevishini ngabantwana kunokubangela ukuba:
1. Ukuxhatshazwa. Umabonwakude uthinta abantwana abaselula kakhulu. Inkqubo yomabonwakude yomntwana omncinci ukuqokelela izandi kunye nemifanekiso. Ngenxa yoko, umntwana uya kusebenza ngokugqithiseleyo.
2. Ukuxhomekeke kunene kwiTV. Ngoku kukodwa oku kuza kubangela ukuba ukuphazamisa ingqalelo umntwana usoloko uvula iTV. Nangona usebenza kwimicimbi yabo, umntwana usemngciphekweni wokubambisana naye.
Iingcali zenzululwazi ziye zafumanisa ukuba ukuba ikhaya lakho lihlala lisebenza ngeTV, ngoko isigama sabantwana bakho siya kuba sezantsi. Ukubukwa rhoqo kwithelevishini kulibazisa ukuphuhliswa kwentetho, kwintsana. Ukuqwalasela iqela labantwana, ukususela kwiinyanga ezimbini ukuya kwiminyaka emine, kubonise ukuba nganye iyure echithelwa kwi-TV, kunciphisa ubude beentetho ngokulinganiselwa kumazwi angama-770. Ukunxibelelana nomntwana okuyinxalenye eyintloko yophuhliso lwengqondo lomntwana. Kwaye ngelixa abantu abadala beTV bengabonisane nomntwana nhlobo.
Akuyomfuneko ukuba uvimbele ngokupheleleyo iTV. Kodwa yonke iminyaka inexesha layo lethelevishini.
1. Ubudala bomntwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwiminyaka emi-2
Ngokwezibalo, umntwana omncinci, ixesha elide achitha kunye nonina kwiTV. Isandi esingenangqungquthela seTV sikhangela umntwana kwiiveki zokuqala zobomi. Umntwana oneminyaka engama-2 ubudala sele sele akwazi ukujika intloko yakhe kwisikrini esikhanyayo. Xa uneminyaka engama-6 ukuya ku-18 umntwana akakwazi ukugcina ingqalelo ixesha elide. Kodwa umntwana unamandla okumxelisa. Umntwana unakho ukwazi ukufunda indlela yokudlala ebonayo kwiTV ngosuku olulandelayo. Apha ungathetha ngethuba elihle lokubukela iTV. Nangona kunjalo, ukuqwalasela okwenzekayo kwesikrini, umntwana kuqala kokuva kwamava. Kwaye ungacingi ukuba icebo alinayo impembelelo kumntwana. Iingcali zengqondo zikholelwa ukuba izinga lokujonga ulwazi ngunyana kule minyaka liphezulu kakhulu. Kule minyaka kunye nomntwana ofuna ukuthetha kakhulu, bonisa imifanekiso, faka umculo omhle. Oku kudala indawo yokuphuhliswa kwamakhono omntwana. Zama ukungasebenzisi iTV njengemvelaphi ephilileyo. Kungcono ungaboni umboniso wakho weTV owuthandayo xa usondeza umntwana wakho.
2. Ubudala bomntwana 2-3 iminyaka
Inkqubo yesifo kunye nengqondo kule minyaka ayilungelelwanga ngokupheleleyo ukubukela iTV. Ngokuqhelekileyo kwixesha elide ukuya kwiminyaka emithathu, ukuphuhlisa imemori, intetho, ingqiqo kunye nokuqwalasela ngokugqithiseleyo. Umabonwakude ubangela ukunyuswa kwengqondo ngenxa yokutshintsha kweemifanekiso ngokukhawuleza. Ngenxa yoko - iphupha elibi, i-whims. Iintsana ezinjalo zilungele ukuba zingabandakanyi ukubukela iTV. Lo mthwalo owongezelelekileyo kwingqondo unokuvimbela imisebenzi yengqondo. Ubunokwenzeka bobuchopho obungakhange buqeqeshelwe.
Ukuchaphazela kakubi abantwana ifilimu yokukrakra, ifilimu emayelana nemfazwe, ubundlobongela, njl. Ukuba umntwana wakho uyethusa ifilimu, ngoko ngaphandle kokuba uthathe inxaxheba kwaye uncede akakwazi ukuhlangabezana nayo. Mamela umntwana wakho. I-TV ayithinteli kuphela imfundo yokuziphatha, kodwa inokulimaza impilo yengqondo. Ukugeleza okungapheliyo kolwazi akuvumeli ukuba bonke baqonde. Kanye kunye nokususwa kocingo, ii-cartoon zakwaMelika zithengiswa kwizikrini, kunye nekhwalithi engathandabuzekiyo. Kwaye ngezinye iziqulatho zeendabuko azihambelani neenguqu zombhali. Isiphetho sinye: khusela imiphefumlo ephosakeleyo yabantwana bakho.
3. Ubudala bomntwana oneminyaka engama-3-6 ubudala
Kule minyaka, ungavumela ukubukela iTV. Umntwana ufunda ihlabathi ngokusebenzisa isikrini seTV. Kodwa ngelo xesha, ukuthetha kunye nenkulumo kuya kuncitshiswa kumncinci. Qaphela ukuba umntwana akaxhomekeke kwiTV. Xa uneminyaka engama-3 ukuya ku-6, ukucinga okucetywayo kufuneka kuphuhlise. Nangona kunjalo, ithelevishini ayinxalenye ekuphuhliseni kwayo. Ukudluliselwa kubantwana beli lizwe kufuneka kuhambelane neminyaka yakhe. Ku luncedo ukubukela iikhathuni okanye iinkqubo zabantwana nabantwana. Kukho ithuba lokuxoxa, ukwabelana ngemifanekiso. Abantwana baya kukubulela kuphela. Nciphisa ixesha lokubukela ezimbini iibhotolo ngosuku. Ixesha lokubukela imiboniso yeTV akufanele libe ngaphezu kweyure nganye ngosuku.
4. Ubudala bomntwana 7-11 ubudala
Eli lidala lingozi kakhulu ngokubukela kweTV okungalawulwayo. Inkqubo yesikolo kunzima kunzima. Kwaye ukuba umntwana uchitha ixesha elide phambi kweTV, unokuba neengxaki esikolweni. Kubalulekile ukulwa nomlingo wengane kumboniso weTV. Kwaye oku kufuneka uhlawule ixesha lokukhulula lomntwana.
Ukuqinisekisa ukuba i-TV ayinayo ingozi kubantwana, landela iingcebiso zethu:
1. Misela ukuba yiziphi iinkqubo zeTV ezivumela abantwana ukuba bajonge, benze isicwangciso seentsapho.
2. Ngokwezifundo, ukuba i-TV ibonakala, phakathi kwegumbi, ngoko umntwana uya kuba nomnqweno wokubukela iTV. Beka ukuze kube lula ukunakwa kwengane yakho kangangoko kunokwenzeka.
3. Musa ukuvumela umntwana wakho ukuba abukele iTV xa edla.
4. Fumana izifundo ezithandekayo kumntwana. Unako ukudibanisa, ukufunda, ukudlala imidlalo yebhodi, njl. Fumana amathoyizi endala. Yonke into entsha indala ekhohliweyo. Ngexesha elithile umntwana uya kufumana umsebenzi. Ngokuqhelekileyo abantwana bathanda ukucula. Culela kunye nabantwana. Kuya kuphuhlisa ukuva kuphela, kodwa nezakhono zokuthetha.
5. Abantwana bathanda ukunceda umama: uhlambe izitya, ucoceke kwigumbi, njl. Ungesabi ukuthembela umntwana usana lomrho kunye ne-rag. Umntwana uya kuthotywa kuphela ngethemba lakho.
Intanethi - inzuzo okanye ingozi kumfundi?
Imbali yembali: ukukhwehlela, ukukhulelwa komntwana
Rash emzimbeni womntwana omncinane
Abazali abanempilo - umntwana ophilileyo
Umntwana wayetyhefu ngokutya kwabantwana
Ukhula oluqinileyo ukusuka kwisifuba
Indlela yokuchonga uhlobo lomfazi ngomlomo
Indlela yokulungiselela umhla omhle wokuthandana
Iimpawu eziwusizo zemononi
Yogi Omkhulu waseNdiya yakudala
Ikhalenda yeLunar yeenwele kunye nezipikili ziyancipha ngoDisemba 2017: iintsuku ezilungileyo
Unokukhetha njani ibhinqa indoda ephosa
Ndinokulala njani ngexesha lokukhulelwa?
U-Aerobics kunye nokubumba abafazi abakhulelweyo
Inkukhu kwiminwe kwi-microwave
Imibongo emfutshane kunye emnandi malunga nokuwa kweebongi zaseRashiya ebantwaneni nasezikolweni